Inkulumbuso yokufikelela kwiNkulumbuso, ubuGcisa bohlobo lwe-Elektroniki Iindaba zeGajethi
Inkulumbuso yoFikelelo kwiMvelaphi, ubuGcisa boMbane 'imodeli entsha yobhaliso
URuben inyongo | | Videogames
Izakufika kwi-PC kweli hlobo lizayo kwaye abasebenzisi baya kuba nezihloko ezingaphezulu kwe-100 ezikhoyo ukonwaba ukusukela kusuku lokuqala. Ngokufanayo, Inkulumbuso yokufikelela kwiNkulumbuso iya kuthi inike ukufikelela kukhupho olutsha phambi kwabanye abasebenzisi. Ungayihlawula inyanga nenyanga okanye kube kanye ngonyaka, kuxhomekeke kumdla wakho.
Inkulumbuso yokufikelela kwiNkulumbuso yimodeli entsha yobhaliso eboniswa buGcisa be-Elektroniki kumnyhadala wayo we-EA Play, idinga phambi kwe I-E3 2018 eya kuqala nge-12 kaJuni kwaye iya kuhlala kude kube nge-15 kaJuni. UbuGcisa boMbane buchaze uphuhliso olutsha kulo nyaka. Kwaye okona kulungileyo? Oko kuyimodeli entsha yobhaliso, abasebenzisi baya kuba nakho ukufikelela kwiintsuku zokukhutshwa zakutshanje ngaphambi kwabasebenzisi bangoku. Ukuchaneka ngakumbi, Uya kuba nokufikelela kwiitayitile kwiintsuku ezi-5 phambi kwabanye abantu.
Olu rhumo lutsha kubuGcisa be-Elektroniki alukho malunga nokufikelela kwiimvavanyo zomdlalo, kodwa kunoko ukufikelela kugqityiwe kwaye akukho mida; Oko kukuthi, unokufikelela kuzo zonke izihloko xa zizonke kwaye udlale zonke izihloko nanini na ufuna. Imfuno kuphela? Soloko ulilungu leNkulumbuso yokuFikelela kweMvelaphi.
Imvelaphi yoFikelelo olusisiseko-uKufikelela kweMvelaphi-iya kuhlala isebenza. Umahluko ophambili? Intoni ngale modeli yobhaliso yakudala uya kuba nomda weyure ezili-10 ukonwabela imidlalo yevidiyo. Ukuphumla, kumacala omabini uya kuba nokufikelela "kwiVault" - ithala leencwadi lamavidiyo afumanekayo- kunye nesaphulelo se-10% kwiMvelaphi.
Zithini izihloko ekulindeleke ukuba zifike kwiintsuku ezimbalwa ezizayo? Ewe, umzekelo, yonke into entsha eboniswe kwi-EA Play 2018: Umhobe, iFIFA 2019, Vulela ezimbini, iMadden NFL 2019, iNdlela yokuPhuma okanye iBala leMfazwe V. Njengoko besesitshilo, iNkulumbuso yokufikelela kwiNkulumbuso ikunika ithuba lokuba nayo Umrhumo wenyanga we-14,99 euro okanye umrhumo wonyaka we-99,99 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Inkulumbuso yoFikelelo kwiMvelaphi, ubuGcisa boMbane 'imodeli entsha yobhaliso
UbuGcisa boBugcisa be-E3 2018
Ezi zizicwangciso uJeff Bezos anazo ngeNyanga